XPS Heat Insulation Inopupuma Boad Extrusion Line (CO 2 Inopupuma Tekinoroji) - China XPS Heat Insulation Inopupuma Boad Extrusion Line (CO 2 Inopupuma Tekinoroji) Mutengesi, Fekitori -Jwell
Neyakavakwa yakavharwa alveolate kuvakwa, XPS kupisa kupisa ndiro inoonekwa seyakanakisa kuputira zvinhu mumusika. Granules kubva kune yakashandiswazve EPS ndiro, sechinhu chikuru zvinhu, pfuura nepakati pekufa unopupa extruder, calibrator, dhonza uye kubvisa unit. Iine yakaderera density, yekumwa mvura, kupisa kwemagetsi uye kupisa kwemhepo kupfuura
iwo emamwe marudzi ekupisa ekuisa mahwendefa, XPS kupisa kuputira ndiro ine simba rakakwira, yakaderera wight, kusagadzikana kwemhepo, ngura kuramba, kukwegura kuramba uye yakaderera mutengo. Naizvozvo ndiro iyi inogona kushandiswa zvakanyanya muimba yekudzivirira sisitimu, mune inotonhorera kuchengetedza, misasa, matura uye zvivakwa zvevagari, munzvimbo dzakavakwa nhandare yendege nharaunda, mumigwagwa uye njanji mainjiniya ekuvaka, mune kupisa kupisa system yemafurati, zvivakwa zvehofisi uye mashopu .
XPS kupisa kupisa ndiro extrusion tambo ine mhando mbiri: imwechete screw tandem extruders mhando uye co-kutenderera yakafanana twin sikuruu extruder ine imwechete screw extruder. Mhando idzi ndeidzi: 135/150 imwechete screw tandem extruder mhando uye 75/150 co-kutenderera yakafanana twin screw extruder ine imwechete screw extruder.Nekuda kwekukanganisa kusanganisa, corotation twin screw etruder inogona kugadzirisa zvinhu zvezvinhu zvakasiyana.
Chichangoburwa kugadzira muchina chakagadzirwa naJwell, kugadzirisa CO 2 seyakaumba mumiriri, iri yekutora palce ye freon uye butane, maficha e green green dziviriro uye yakaderera mutengo kudyiwa.
Jwell DYPS-X chimiro, WPC dzakateerana kushandiswa kwakakosha crusher